नमोबुद्धका किसानले पाए अनुदानमा मौरीघार ! – NamoBuddha Khabar
नमोबुद्धका किसानले पाए अनुदानमा मौरीघार !
बुधबार, आषाढ ०९, २०७८ | १:०९:३६ |
भकुण्डेबेशी–काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिकाका किसानहरुले अनुदानमा मौरीघार पाएका छन् । नगरलाई मौरीपालनमा अब्बल नगर बनाउने उद्देश्यसहित ११ वटै वडाका कृषकलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा मौरीसहितको मौरीघार वितरण गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
मंगलबार किसानलाई मौरीपालनसम्वन्धी तालिमसहित घार वितरण गरिएको नगरपालिका कृषि शाखा प्रमुख रेशम दाहालले जानकारी दिनुभयो । चालु आर्थिक बर्षको कार्यक्रमअनुसार ५६ वटा मौरीको घार वितरण गरिएको छ ।
कृषकहरुलाई नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजन पौडेल र वडा नं. १० का वडाअध्यक्ष रामकृष्ण अधिकारीले मौरीघार हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले नगरका किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियानअन्तर्गत मौरीघार वितरण गरिएको र आगामी बर्ष पनि यसले निरन्तरता पाउने बताउनुभयो । उहाँले यसै बर्षदेखि अनुदानमा भैसी तथा बाख्रा वितरण अभियानको सुरुवात भइसकेको र त्यसको प्रभावकारिता हेरेर आगामी बर्ष थप बजेटको व्यवस्थासहित कार्यक्रम अघि बढाउने जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै वडा नं. १० का वडाअध्यक्ष रामकृष्ण अधिकारीले नगरका ९० प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भर रहेकाले कृषिमै आत्मनिर्भर बनाउन अभियान थालिएको बताउनुभयो । नमोबुद्ध नगरलाई अर्गानिक कृषिको केन्द्र बनाउने उद्देश्य रहेको भन्दै अधिकारीले त्यसमा कृषकहरुको साथ र सहयोग आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा किसान रामप्रसाद घिमरेले आफूहरुले मौरीघारसहित तालिमसमेत पप्त गरेको र व्यवस्थित एवं व्यवसायिकरुपमा मौरीपालन कार्यलाई अघि बढाउन हौसला मिलेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । नगरपालिकाले मौरीपालनका लागि पकेट क्षेत्र नै बनाएर अन्य पालिका र जिल्लामा मौरी र मौरीघार निर्यात गर्ने योजना बनाएको छ । यस्तै नगरमा उत्पादिन महको बजारीकरणको वयवस्थासमेत गरिने योजना तय भएको छ ।
नमोबुद्ध नगरपालिकाले यसअघि विभिन्न वडाका किसानका लागि ८० प्रतिशत अनुदानमा १ सय ५५ वडा पाडी वितरण गरिसकेको छ भने चालु आर्थिक बर्षमै बाख्रा वितरण गर्दैछ । कृषि शाखामार्फत ७५ प्रतिशत अनुदानमा भुसा काट्ने मेसिन (च्यापकटर) ५० प्रतिशत अनुदानमा मिनिटिलर, इलेक्ट्रिक पम्प, फलफूलको बिरुवा वितरण गर्दैछ ।